दर्जन बढी पार्टी फुटाउन मेनरोल खेलेका प्रचण्ड यो गठबन्धन भत्काउन यतिसम्म गरिरहेको खुलासा, बालुवाटार पुग्यो सूचना ! – GALAXY
दर्जन बढी पार्टी फुटाउन मेनरोल खेलेका प्रचण्ड यो गठबन्धन भत्काउन यतिसम्म गरिरहेको खुलासा, बालुवाटार पुग्यो सूचना !
दर्जन बढी पार्टी फुटाउन मेनरोल खेलेको आरोप लागेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन नै फुटाउन लागेको खुलासा भएको छ । ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग सल्लाह नै नगरी एमसीसी पास नहुने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि उनी गठबन्धन फुटाउन लागि परेको कुरालाई बल पुगेको हो ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र नेपाल पछिल्लो समय भित्रभित्रै सरकारविरुद्ध लागेका छन् । मंगलबार पार्टीको सहायक संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग नेपाल ९वाईसीएल० को पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
एमसीसी पास हुँदैन । किनभने हामीले यसबारे अमेरिकालाई कुटनीतिक नोट पठाएका छौँ, त्यसको जवाफ आएन । जवाफ नआएपछि एमसीसी पास हुने कुरा हुँदैन’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा माओवादी केन्द्रले सहमति जनाउँदैन ।’